Shiinaha 500ml Caleenta buufinta Boodhka Ka saara Caleemaha buufiska dhalaalaya ee warshadeeyayaasha iyo alaab-qeybiyeyaasha | PENGWEI
500ml Caleenta buufinta Boodhka Ka saar Caleemaha kuwa dhalaalaya oo dhalaalaya dhirta
1. aan waxyeello lahayn, udgoon cusub
2.loo isticmaalo caleemaha dhalaalaysa, boodhka ka saar
4.tayada sare, qiimaha ugu dambeeyay
Waa maxay caleen dhalaalaysa, magaceeda, waxaynu ogaan karnaa inay caleen ka dhigi karto dhalaal ama dhalaal. Leafshine waxay gacan ka geysataa ilaalinta midabada dhalaalaya ee caleemaha dhirtaada iyo sidoo kale kuwa caleemaha gooyay bouquet ubaxaaga. Bixinta muuqaal dabiici ah oo dhalaalaysa taasoo ka dhigaysa mid cusub oo aad u nool. Sawirada hoose ayaa muujinaya sida caleenta u shaqeyso.
Shayga caleen dhalaalaya
Cabbirka H:190mm, D:65mm
Midabka gasacadaha cagaaran
Miisaanka Kiimikada 300g
Xirmooyinka Cutubka Dhalada Daasadda ah
Baaxadda Cabbirka 37x 28x17.2cm/ctn
Faahfaahinta Xirmada 12 pcs oo ku jira hal sanduuq oo bunni ah/xirmo la habeeyey
Mid kale OEM waa la aqbalay
caleentawaxay ka dhigtaa caleemaha inay u muuqdaan kuwo si dabiici ah u caafimaad qaba oo aan saliid lahayn, markaa dusha sare ayaa nadiif ah muddo dheer marka loo eego dhalaalka caleen ee ka taga hadhaaga saliidda leh. Waxay leedahay ur dabiici ah oo wacan, waana sahlan tahay in la isticmaalo sababtoo ah buufintiisa. Waxay ku habboon tahay inta badan dabiiciga ah amadhirta macmalka ahmarka laga reebo kuwa leh caleemaha jilicsan ama timaha leh, succulents iyo ferns. Waa in aan lagu buufin ubaxyada iyo burooyinkeeda.
Maadaama iftiinka caleentu ay dhammaan ku saabsan tahay dhaqaaleynta waqtiga iyo dadaalka, si fudud ku buufi qadar yar caleemaha dhirtaada dhabta ah iyo kuwa caagga ah, waxayna isla markiiba ka dhigi doontaa kuwo dhalaalaya. Hubi inaad si xooggan u ruxdo buufinta ka hor intaanad isticmaalin oo ku buufi qiyaastii 30cm. Uma baahnid inaad maro ku tirtirto maadaama ay dhakhso u engegto. Runtii, waxa ay daryeelka dhirta gudaha iyo dhirta balaastikada ka dhigaysa mid fudud qaab nololeedkaaga degdega ah. Ku buufi laba jeer bishii si aad u ilaaliso jaakad nadiif ah oo dhalaalaya.
Si fiican u rux ka hor intaan la isticmaalin, ku buufi meel u jirta 15-20 cm caleenta; Haddii caleemaha lagu daboolay boodh, wasakh biyo ah, baro kaalshiyam ah, iwm. Ka dib buufinta si fudud ayaa loo tirtiri karaa maro, caleentu weli waa dhalaalaya.
1.iska ilaali taabashada indhaha ama wejiga.
3.Weel cadaadis la saaray.
4.Ka ilaali iftiinka qorraxda tooska ah.
5.Ha ku kaydin heerkul ka sarreeya 50℃(120℉).
6.Ha daloolin ama ha gubin, xitaa ka dib markaad isticmaasho.
7.Ha ku buufin ololka, walxaha shidan ama meelaha kulaylka agtooda.
8.Ka ilaali meel aanay carruurtu gaadhi karin.
9.Tijaabi ka hor isticmaalka. Waxa laga yaabaa inay wasakheeyaan maryaha iyo sagxadaha kale.
Gargaarka degdega ah iyo daawaynta
1.Haddii la liqo, wac Xarunta Xakamaynta Sunta ama dhakhtarka isla markiiba.
2.Ha keenin matag.
Haddii indhaha lagu hayo, ku raaci biyo ugu yaraan 15 daqiiqo.
Hore: 200ml xaflad fiista de Espuma buufinta barafka ee dabaaldega carnival Holi
Xiga: Xaflada Favors Santa Barafka Buufiyo Christmas Artificial 9 oz Karsado Qurxinta Geed Christmas
ka hortagga boodhka
siigada iska saar
buufin caleen dhalaalaya
ka dhig caleen dhalaalaysa
Lagu Sameeyay PRC Ubax Luul buufin loogu talagalay Qurxinta Ubaxa...
buufin ubaxa fluorescence for qurxinta ubaxa